Mayelana - Wavelength Opto-Electronic (S) Pte Ltd
Imigomo nemibandela yokuthengisa
1. UKWAMUKELWA KWEMIGOMO
I-WOE (WOE) yamukela ama-oda ngeposi, ngocingo, ngefeksi noma nge-imeyili. Wonke ama-oda angaphansi kokwamukelwa yi-WOE. Ama-oda kufanele afake Inombolo Ye-oda Lokuthenga futhi ucacise izinombolo zekhathalogi ye-WOE noma imininingwane egcwele yanoma yiziphi izimfuneko ezikhethekile. Ama-oda afakwe ngocingo kufanele aqinisekiswe ngokuthumela ikhophi ephepheni ye-Purchase Order. Ukulethwa Komyalelo Wokuthenga kuyohlanganisa ukwamukela Imigomo Nemibandela Yokuthengisa YE-WOE, eshiwo lapha kanye nanoma iyiphi ikhotheshini ehlinzekwe yi-WOE.
LE MIBANDELA NEMIBANDELA YOKUTHENGISA KUZOBA ISITATIMENDE ESIPHELELE FUTHI ESIKHETHEKILE SEMIGOMO YOKUVUMELWA PHAKATHI KOMTHENGI KANYE NOMAYE.
2. IZICACISO ZOMKHIQIZO
Ukucaciswa okuhlinzekwe kukhathalogi ye-WOE, izincwadi, noma kunoma yiziphi izingcaphuno ezibhaliwe kuhloswe ukuthi zibe nembayo. Nokho, i-WOE iyaligodla ilungelo lokushintsha imininingwane futhi ayenzi simangalo mayelana nokufaneleka kwemikhiqizo yayo nganoma iyiphi injongo ehlosiwe.
3. IZINGUQUKO ZOMKHIQIZO KANYE NOKUFANELEKILE OKUNYE
I-WOE igodla ilungelo (a) lokwenza izinguquko Emikhiqizweni ngaphandle kwesaziso nesibopho sokufaka lezo zinguquko kunoma yimiphi imikhiqizo ethunyelwe kuMthengi ngaphambilini futhi (b) ithumele kuMthengi uMkhiqizo wamanje kakhulu ngaphandle kwencazelo yekhathalogi, uma ikhona.
4. UMTHENGI USHINTSHA KUMA-ODA NOMA IMINININGWANE
Noma yiziphi izinguquko kunoma yiliphi i-oda lemikhiqizo yangokwezifiso noma inketho emisiwe, noma iliphi i-oda noma uchungechunge lwama-oda afanayo eMikhiqizo ejwayelekile okuhlanganisa kodwa okungakhawulelwe kunoma yiziphi izinguquko ezicacisweni zeMikhiqizo, kufanele kuvunywe kusengaphambili ngokubhalwa yi-WOE. I-WOE kufanele yamukele isicelo sokushintsha soMthengi okungenani ezinsukwini ezingamashumi amathathu (30) ngaphambi kwedethi ehleliwe yokuthunyelwa. Uma kwenzeka izinguquko kunoma iyiphi i-oda noma imininingwane ye-
Imikhiqizo, i-WOE igodla ilungelo lokulungisa izintengo nezinsuku zokulethwa kweMikhiqizo. Ngaphezu kwalokho, umthengi uzoba nesibopho sazo zonke izindleko ezihambisana nalolo shintsho okuhlanganisa, kodwa kungagcini nje, izindleko ezisindwayo zazo zonke izinto zokusetshenziswa, umsebenzi oqhubekayo kanye nempahla eqediwe ekhona noma e-odiwe ethintwa yilolo shintsho.
Noma yiliphi i-oda lemikhiqizo yangokwezifiso noma inketho emisiwe, nanoma yiliphi i-oda noma uchungechunge lwama-oda afanayo eMikhiqizo ejwayelekile lingakhanselwa kuphela ngemva kokugunyazwa okubhaliwe kwangaphambilini kwe-WOE, ukugunyazwa okunganikezwa noma kubanjwe ngokubona kwe-WOE kuphela. Noma yikuphi ukukhanselwa kwe-oda, Umthengi uzoba nesibopho sazo zonke izindleko ezihlobene nokukhanselwa okunjalo okuhlanganisa, kodwa kungagcini nje, izindleko ezisindwayo zazo zonke izinto zokusetshenziswa, umsebenzi oqhubekayo kanye nempahla eqediwe ekhona noma e-odiwe ethintwa ukukhansela okunjalo sebenzisa imizamo enengqondo yezentengiselwano yokunciphisa izindleko ezinjalo zokukhansela. Akukho mcimbi umthengi okumele akhokhelwe ngaphezu kwentengo yenkontileka yeMikhiqizo ekhanseliwe.
Izintengo zekhathalogi zingashintsha ngaphandle kwesaziso. Izintengo zangokwezifiso zingashintsha ngesaziso sezinsuku ezinhlanu. Ukwehluleka ukuphikisa ukuguqulwa kwentengo ku-oda langokwezifiso ngemuva kwesaziso kuzothathwa njengokwamukela ukuguqulwa kwentengo. Amanani e-FOB Singapore futhi awafaki imali yezimpahla, imisebenzi kanye nezimali zomshwalense. Izintengo ezicashuniwe azikhethekile, futhi umthengi uyavuma ukukhokha, noma iyiphi intela yezwe, yesifunda noma yendawo, ukuthengisa, ukusetshenziswa, impahla yomuntu siqu nanoma iyiphi enye intela. Amanani acashuniwe asebenza izinsuku ezingama-30, ngaphandle uma kucashunwe ngenye indlela.
I-WOE iqinisekisa ukupakishwa okufanele futhi izothunyelwa kumakhasimende nganoma iyiphi indlela ekhethwe i-WOE, ngaphandle kwalapho kuchazwe ngenye indlela Ku-oda Lokuthenga Lomthengi. Ngemva kokwamukelwa kwe-oda, i-WOE izohlinzeka ngosuku lokulethwa olulinganiselwe futhi izosebenzisa imizamo yayo engcono kakhulu ukuhlangabezana nosuku olulinganiselwe lokulethwa. I-WOE ayinacala nganoma yimuphi umonakalo odalwe ukulethwa sekwephuzile. I-WOE izokwazisa Umthengi nganoma yikuphi ukubambezeleka okulindelekile ekulethweni. I-WOE iyaligodla ilungelo lokuthutha kusengaphambili noma ukuhlela kabusha, ngaphandle uma umthengi esho okuhlukile.
8. IMIGOMO YOKUKHOKHA
I-Singapore: Ngaphandle kokuthi kucaciswe ngenye indlela, zonke izinkokhelo kufanele futhi zikhokhwe zingakapheli izinsuku ezingu-30 kusukela ngedethi ye-invoyisi. I-WOE izokwamukela inkokhelo nge-COD, isheke, noma i-akhawunti esungulwe nge-WOE. Ama-oda Amazwe Ngamazwe: Ama-oda okulethwa kubathengi abangaphandle kwase-Singapore kufanele akhokhwe ngokugcwele ngamadola ase-US, ngokuthunyelwa ngezintambo noma ngencwadi yekhredithi engenakuhoxiswa ekhishwe yibhange. Izinkokhelo kufanele zifake zonke izindleko ezihambisanayo. Incwadi yesikweletu kufanele isebenze izinsuku ezingama-90.
Imikhiqizo Yesitokwe: Imikhiqizo ye-WOE yokubona isitokwe igunyaziwe ukuthi ihlangabezane noma yeqe izicaciso ezishiwo, futhi ingabi nasici ezintweni ezibonakalayo noma ekwenziweni kwayo. Lesi siqinisekiso sizosebenza izinsuku ezingu-90 kusukela ngosuku lwe-invoyisi futhi singaphansi Kwenqubomgomo Yokubuyisela ebekwe kule Migomo Nemibandela.
Imikhiqizo Engokwezifiso: Imikhiqizo ekhiqizwe ngokukhethekile noma eyenziwe ngokwezifiso iqinisekisiwe ukuthi ayinazo iziphambeko zokukhiqiza futhi ihlangabezane nemibandela yakho ebhaliwe kuphela. Lesi siqinisekiso sisebenza izinsuku ezingu-90 kusukela ngosuku lwe-invoyisi futhi singaphansi Kwenqubomgomo Yokubuyisela ebekwe kule Migomo Nemibandela. Izibopho zethu ngaphansi kwalokhu wIzivumelwano zizokhawulelwa ekushintsheni noma ekulungiseni noma ekuhlinzekweni koMthengi isikweletu ngokuthenga esikhathini esizayo ngenani elilingana nenani lokuthenga lomkhiqizo onesici. Akukho mcimbi esiyobe sinesibopho sanoma yimuphi umonakalo wengozi noma umphumela noma izindleko ezivela kuMthengi. Amakhambi angenhla ayiwodwa futhi ayikhambi elikhethekile loMthengi kunoma yikuphi ukwephulwa Kweziqinisekiso ngaphansi kwale nkontileka. Lesi Siqiniseko Esijwayelekile ngeke sisebenze ngokuphathelene nanoma yimuphi umkhiqizo othi, lapho uhlolwa yi-Wavelength Singapore, ubonise ubufakazi bomonakalo ngenxa yokuhlukunyezwa, ukusetshenziswa kabi, ukuphathwa kabi, ukuguqulwa, noma ukufakwa okungafanele noma ukusetshenziswa, nanoma yiziphi ezinye izimbangela ezingaphezu kokulawulwa kwe-Wavelength. Singapore.
10. INQUBOMGOMO YOKUBUYISA
Uma umthengi ekholelwa ukuthi umkhiqizo unesici noma akazange ahlangabezane nezicaciso ezishiwo I-WOE, Umthengi kufanele azise I-WOE zingakapheli izinsuku ezingu-30 kusukela Kudethi ye-invoyisi futhi kufanele abuyise izimpahla zingakapheli izinsuku ezingu-90 kusukela Kudethi ye-invoyisi. Ngaphambi kokubuyiselwa komkhiqizo, Umthengi kufanele athole INOMBOLO YOKUGUNYAZWA YOKUBUYISA (I-RMA). Awukho umkhiqizo ozocutshungulwa ngaphandle kwe- I-RMA. Umthengi kufanele-ke apakisha umkhiqizo ngokucophelela futhi awubuyisele kwa-WOE, kanye nempahla ekhokhelwa ngaphambili, kanye Ifomu lesicelo le-RMA. Umkhiqizo obuyisiwe kufanele ube kwiphakheji yokuqala futhi ungabi nasici noma umonakalo odalwe ukuthunyelwa. Uma i-WOE ithola ukuthi umkhiqizo awuhlangabezani nezincazelo ezibekwe esigabeni 7 ngemikhiqizo yesitoko;
MAYE, ngokukhetha kwayo kuphela, ukubuyisela inani lokuthenga, ukulungisa iphutha, noma esikhundleni somkhiqizo. Ngokuzenzakalelayo koMthengi, okuthengiswayo ngeke kwamukelwe ngaphandle kokugunyazwa; Izimpahla ezamukelekayo ezibuyisiwe zizokhokhiswa ukubuyisela isitoko; Izinto ezi-odwe ngokukhethekile, eziphelelwe yisikhathi noma ezenziwe ngokwezifiso azibuyiseleki.
11. AMALUNGELO OKUPHAKATHI NGOBUCHWEPHESHE
Noma yimaphi Amalungelo Empahla Yobuhlakani emhlabeni wonke, okuhlanganisa, ngaphandle komkhawulo, izinto ezisunguliwe (noma ngabe azifakiwe noma azifakwanga), amalungelo obunikazi, amalungelo obunikazi, amalungelo okushicilela, umsebenzi wobunikazi, amalungelo okuziphatha, izimpawu zokuhweba, izimpawu zesevisi, amagama okuhweba, izimfihlo zohwebo zezingubo zokuhweba. futhi zonke izicelo nokubhaliswa kwakho konke okungenhla okuvela ekusebenzeni kwale Migomo Yokuthengisa ecatshangwayo, ethuthukisiwe, etholwe noma eyehliswa ukuthi isetshenziswe UWOE, kuyoba impahla ekhethekile ye-WOE. Ngokukhethekile, I-WOE izoba ngumnikazi wawo wonke amalungelo, isihloko kanye nentshisekelo emikhiqizweni nakuzo zonke izinto ezisunguliwe, imisebenzi yobuqambi, izakhiwo, ulwazi, imibono noma ulwazi olutholiwe, oluthuthukisiwe, olwenziwe, olucatshangwayo noma oluncishisiwe ukuze kwenziwe, nge-WOE. , ngesikhathi sokusebenza kwale Migomo Yokuthengisa.
Uma une-akhawunti kule sayithi, ungacela ukuthola ifayela elithunyelwe ngaphandle ledatha yomuntu siqu esiphethe ngawe, kuhlanganisa nanoma iyiphi idatha osinikeze yona. Futhi ungacela ukuthi sisule noma iyiphi idatha yomuntu siqu esinayo ngawe. Lokhu akubandakanyi noma iyiphi idatha esinesibopho sokuyigcina ngokwezinjongo zokuphatha, zomthetho, noma zokuphepha. Uyavuma futhi ukusivumela ukuthi sixhumane nawe nganoma iyiphi indlela (okungukuthi, i-imeyili, inombolo yocingo) nganoma yiziphi izinjongo.